दशैँमा मासु त खाऔं, तर होस् गरौं फुड पोइजेनिङ होला ! Setokhari ::. News Portal
बिहिबार, कात्तिक ११, २०७८ ०७:३५:५४
दशैँमा मासु त खाऔं, तर होस् गरौं फुड पोइजेनिङ होला !
नेपालगन्ज २७ असोज : दशैंलगत्तै फुड पोइजनिङ (खानाको कारण हुने विषाक्तता) भई अस्पताल धाउनेहरुको संख्या नेपालमा धेरै छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने त ?
दशैं हिन्दूहरुको महान् चाड । ठूलाबडाको आशिर्वाद र टिका थाप्ने अवसर हो यो । दशैं मासुको लागि पनि त्यत्तिकै प्रख्यात छ । विशेष गरी मासुका विभिन्न परिकारहरु बनाएर खाने चलन हुन्छ तर सानोसानो लापरवाहीले थुप्रै मानिसहरु विरामी पर्छन् र अस्पताल धाउन बाध्य हुन्छन् ।
यसपालिको दशैंमा मासुजन्य रोगबाट कसरी बच्ने, आउनुहोस्, केही चर्चा गरौँ ।
नेपालमा भने मासुबाट जुका पर्ने र ब्याक्टेरिया सङ्क्रमण हुने बढी पाइएको छ । कहिलेकाहीँ बर्ड फ्लु जस्ता भाइरल रोगहरु पनि आउँछ । दशैंलगत्तै फुड पोइजनिङ (खानाको कारण हुने विषाक्तता) भई अस्पताल धाउनेहरुको संख्या नेपालमा धेरै छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने त ?
मासुबाट रोग कसरी सर्छ त ?
–मासु काट्ने र तयार गर्ने व्यक्ति तथा हतियार स्वस्थ र सफा नभएमा
–काँचो, पोलेको तथा नपाकेको मासु खाएमा
भोजमा नेपाली खाना त यिनै हुन्, तर, सफा र चिल्लो कम भएको नै खाऔं । भोजमा नेपाली खाना त यिनै हुन्, तर सफा र चिल्लो कम भएको नै खाऔं ।
– काँचो मासु (कचिला) र पोलेको मासु (छोयला) को प्रयोग सकेसम्म नगर्ने तथा खुला राखेको र बासी मासु नखाने
–ताजा मासुलाई २ देखि ४ डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिजमा ४८ घण्टासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
– फ्रिजमा राख्दा जहिले पनि छोपेर राख्ने र कहिले पनि माथिल्लो भागमा नराख्ने । माथिल्लो भागमा राख्दा मासुमा भएका किटाणुहरु मासुमै हुने तरल पदार्थमार्फत् तल झर्नसक्ने हुँदा तल
राखिएका अन्य खाना, सागसब्जी, फलफूल तथा तरकारीहरुमा पर्नसक्ने खतरा हुन्छ ।
– दिनहुँ मासु प्रयोग नगर्ने,हरियो सागपात, फलफूल र अन्य तरकारीहरु पनि बारम्बार खाइरहने